July 7, 2021 - ApannPyay Media
ဒီလို ယောကျင်္ားမျိုးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ အချိန်မှသာအိမ်ထောင်ပြုဖို့ စဉ်းစားပါ
July 7, 2021 by ApannPyay Media
ဒီလို ယောကျင်္ားမျိုးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ အချိန်မှသာအိမ်ထောင်ပြုဖို့ စဉ်းစားပါ မိန်းကလေးတိုင်းဟာအချစ်ရေးမှာကံကောင်းချင်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်အပေါ်ပျော်ရွှင်မှု၊ဂရုစိုက် မှုပေးနိုင်ပြီးသစ္စာရှိတဲ့ယောကျာ်းမျိုးနဲ့ပဲဆုံဆည်းချင်ကြပါတယ် …… ။ အောက်ပါအချက်လေးတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ချစ်သူကောင်လေးမျိုးကိုရထားပြီးပြီဆိုရင် သင်ဟာပတ်ဝန်းကျင်မှာရော သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းကြားမှာပါသင့်ကိုဝိုင်းပြီး အားကျရမယ့်ပျော်ရွှင်ဖွယ် အချစ်ရေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ် ….. ။ ၁။ဦးစားပေးမှုမှာ သင်ကနံပါတ်တစ်ပဲ ။ အလုပ်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဖြစ်စေ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းကြားမှာ ဖြစ်စေသင်နဲ့ယှဉ်ရမယ့် ကိစ္စမျိုးရှိလာခဲ့ရင်သင့်ကိုပဲ ပထမဦးစားပေး ရွေးချယ်မယ့်သူမျိုးပါ။ သင်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု၊ကျန်းမာရေးကိုလည်း သူကအမြဲစောင့်ရှောက်တတ်တဲ့သူမျိုးပါပဲ …. ။ ဒီလို ယောကျင်္ားမျိုးနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှသာ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ စဉ်းစားပါ။ ၂။ရင်ဖွင့်စကားတွေနားထောင်ပေးပြီး အမြဲအားပေးသူမျိုး ။ သင်က ရင်ဖွင့်စရာတောင် မလိုပါဘူး။ သင့်မျက်နှာမှာ အလိုမကျတာတွေ့ရင် သူက ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကို သိနှင့်ပြီး သင့်မကျေနပ်ချက်တွေကို မေးမယ့်သူမျိုးပါ။ သင်ရဲ့အခက်အခဲတွေမကျေမနပ်ဆိုလာတဲ့ ရင်ဖွင့်စကားတွေကိုဂရုတစိုက်နားထောင်ပေးပြီးအကြံဉာဏ်ပေး မယ့်သူမျိုးပါ …. … Read more
တော်တန်ရုံအဖျားနဲ့ virus ပိုး မကူးနိုင်ပဲ ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေ ပိုကောင်းဖို့ ကြက်သွန်သံပုရာစမ်းသုပ်
တော်တန်ရုံအဖျားနဲ့ virus ပိုး မကူးနိုင်ပဲ ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေ ပိုကောင်းဖို့ ကြက်သွန်သံပုရာစမ်းသုပ် ကြက်သွန်နီသံပုရာအစွမ်းအံ့မခန်း ဒီရက်ပိုင်း ကြက်သွန်သံပုရာစမ်းဆားလေးနဲ့ သုပ်ကို နေ့တိုင်းလေး စားဖြစ်နေတယ်။ တော်တန်ရုံ အဖျားနဲ့ virus ပိုး မကူးနိုင်ပဲ ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေ ပိုကောင်းလာသလို ခံစားရတယ်။ အားလုံး စားကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ သုပ်စားတော့မယ်ဆို ကြက်သွန်နီကို အခွံခွါ၊ ဖင်နဲ့ခေါင်းကို ဒါးနဲ့ ဖြတ်ပြီး အကွင်းလေးတေလှီးပြီး ပန်ကန်ထဲ ထည့်ပါ။ တော သံပုရာသီးလေးကို ရေးဆေးပြီး တခြမ်းခွဲပြီး ကြက်သွန်ပေါ် အရည်ညစ်ချပါ။ ဆားလေးသင့်ရုံဖြူးပြီး စားလို့ရပါပြီ။ အစပ်ကြိုက်ရင် ငရုပ်သီးစိမ်းလေး ကြိုက်သလောက် ကပ်ကြေးလေးနဲ့ ကိုက်ထည့်ပါ။ ကြက်သွန်ကို အခွံနွှာပြီး တစ်ခြမ်းခွဲပြီး ရေဆေးလိုက်ရင် အာနိသင် လျော့သွားတယ် ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒါကြောင့် တစ်ခြမ်းခွဲပြီး … Read more
ကြိုတင်အသိပေးခြင်း 8.7.2021 ရက်မှစတင်ပြီး တပတ်အတွင်း ရေကြီးရေလျံခြင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောဒေသများ
ကြိုတင်အသိပေးခြင်း 8.7.2021 ရက်မှစတင်ပြီး တပတ်အတွင်း ရေကြီးရေလျံခြင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောဒေသများ 8.7.2021 ရက်မှစတင်ပြီး တပတ်အတွင်းကားလမ်းရေကျော်ခြင်း တောင်များ ပြိုကျခြင်း မြစ်ရေများလျှံပြီးရေကြီးခြင်းရေစီးဆင်းမှု့မကောင်းသောနေရာများတွင် ပြည့်လျှံရေကြီးခြင်းဖြစ်စဉ်များ မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဒေသတွေမှာ တပတ်အတွင်းဖြစ်လာနိုင်သည်ကိုကြိုတင်အသိပေးခြင်း သဘာဝဘေးဆိုတာ ကြိုတင်သိရှိကာကွယ်နိုင်ရင် ဆုံးရှုံးမှု့လည်းနည်းနိုင်ပါတယ်လေထုက တသတ်မတ်ထဲသွားနေတာမဟုတ်ပါအမြဲပြောင်းလည်းနေပါတယ် ဒါပေမဲ့ လက်ရှိလေထု အနေအထားနဲ့တွက်ချက် ပြီးဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်းတာပါ ဒါကြောင့် ကြိုတင်အသိပေးတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီး ဒီသတိပေးချက်ကိုရေးသားလိုက်တာပါ အဓိကဖြစ်စဉ်က ‌ဟိုင်နန်ကျွန်းက 97wပါ သူရဲ့ ရွေ့လျှားမှု့က မြောက်ဘက်ကိုပါများရင်တရုတ်ပြည်ထဲကိုဝင်နိုင်ပြီး အနောက်ဘက်ကို အားများလာရင် ဗီယက်နန်နိုင်ငံ မြောက်ဘက်ဟနွိုန်းမြို့ဘက်ဝင်နိုင်တယ် ဗီယက်နန်ပင်လယ်ဘက်ကို ဝင်တာနဲ့လေဖိအားနည်းလည်း လေထုဖိအားတွေဆက်တိုက်ကျဆင်းပြီး မုန်တိုင်ငယ်အဆင့်လေတိုက်နှုန် 30mphကျော်သွားနိုင်တယ် အနောက်ဘက်ကို အားပြုပြီးရွှေလာနိုင်တယ် ဒါဆိုရင် လက်ရှိ ဆွဲခေါ်နေတဲ့ မုတ်သုန်လေကိုပြန်ပြီး သက်ရောက်မှု့တွေရှိလာမယ်နောက်ပြိုကွဲးထွက်လာမယ့် တိမ်ဆိုင်တွေလည်းသက်ရောက်မှု့ရှိလာမယ် ဒါတွေနဲ့ သက်ရောက်မှု့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေ ခံစားရပြီးမုတ်သုန် ထုတ်ကုန်နဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ ပိုပြီးခံစားရတတ်တယ် အထူးသဖြင့် … Read more
ကျောက်ကပ်ကိုထိခိုက်စေသော အမူအကျင့်များ (၁) နံနက်စာ မစားခြင်း။ (၂) ဆား စားသုံးမှု များနေခြင်း။ (၃) ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း။ (၄) ရေသောက်နည်းခြင်း။ (၅) ဆေးဝါများ အလွန်အကျွံ မှီဝဲနေခြင်း။ (၆) လုံလောက်သော အနားယူခြင်း မရှိခြင်း။ (၇) တစ်ခါတစ်လေ အလွန်အကျွံ စားခြင်း။ (၈) အသားများကို အလွန်အကျွံစားခြင်း။ (၉) အရက်အလွန်အကျွံ့သောက်ခြင်း။ (၁၀) မနက်အိပ်ယာထ ဆီးသွားချင်သည်ကိုမသွားပဲ ချုပ်တည်းထားခြင်း။ ကျောက်ကပ်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်တာကြောင့်ဆင်ခြင်သင့်တဲ့အမူအကျင့်(၁၀)မျိုး ကျောက်ကပ်က သွေးကြောထဲမှာ လှည့်ပတ်နေတဲ့သွေးတွေကို သန့်စင်အောင်စစ်ထုတ်ပေးပြီး အစားအစာတွေကနေဗီတာမင်၊ သတ္တုဓာတ်တွေကို စုပ်ယူကာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရေတြကို ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးတဲ့အပြင် ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုမှာလည်း ကူညီပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေးက ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အရမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ … Read more
လူမှုကွန်ယက်မှာရေပန်းစားနေတဲ့ ဖုန်းအရမ်းဆော့လွန်းတဲ့ကလေးကို ပညာပေးလိုက်တဲ့မိခင်
လူမှုကွန်ယက်မှာရေပန်းစားနေတဲ့ ဖုန်းအရမ်းဆော့လွန်းတဲ့ကလေးကို ပညာပေးလိုက်တဲ့မိခင် ကလေးမိဘများ ဖုန်းဆော့လွန်းတဲ့ မိမိရဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေကို တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းလေးကို သုံးလိုက်ကြပါလို့ ချစ်ပရိသတ်ကြီးကို အကြံကောင်းလေးပေးလိုက်ပါရစေ။ဖုန်း အရမ်းဆော့တဲ့ ကလေးကို ဖုန်းမဆော့နဲ့လို့ ပြောလို့ ပြောမရခဲ့ရင် ကလေး အိပ်ချိန်မှာ Eyeshadow ကို အခုလို ပုံပါတိုင်း လိမ်းပေးလိုက်ပါ..။ ကလေးနိုးလာချိန်မှာ ကလေးရဲ့ မျက်လုံးကိုမြင်တော့ လန့်ပြီးငိုပြ ပြာယာခတ်ပြလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်ကလေးလည်း ကြောက်ပြီးနောက်ဆော့ရဲတော့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး..။ ခဏလောက်တော့ ကလေးစိတ်ဆင်းရဲသွားမှာတော့ အမှန်ပါပဲ..။ ဒါပေမယ့် မိမိရဲ့ ရင်သွေးငယ်လေး ဖုန်းဆော့တာများလွန်းလို့ ဦးနောက်၊ မျက်လုံး နှင့် အာရုံကြောများ တစ်ခုခု ပျက်စီး ဆုံးရှုံးလိုက်ရမှာနဲ့ စာရင် တခဏတာ စိတ်ဆင်းရဲစေလိုက်တာ မပြောပလောက်ဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။ လူမႈကြန္ယက္မွာေရပန္းစားေနတဲ့ ဖုန္းအရမ္းေဆာ့လြန္းတဲ့ကေလးကို ပညာေပးလိုက္တဲ့မိခင္ ကေလးမိဘမ်ား … Read more
ဝါတွင်း (၃)လ ရက် ပေါင်း(၉၀)စိပ် တဲ့ ကိုးနဝင်း ပုတီးစိပ်နည်း
ဝါတွင်း (၃)လ ရက် ပေါင်း(၉၀)စိပ် တဲ့ ကိုးနဝင်း ပုတီးစိပ်နည်း စိပ်ရမဲ့ ရက်လေးတွေ သက်မှတ် ပြီး ပါပြီ ဒုတိယ ဝါဆို လပြည့်နေ့(ဓမ္မစကြာနေ့မှ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့)ထိဖြစ်ပါတယ် သက်သတ် လွတ်လည်း စားစရာ မလို ပါဘူး အချိန်လည်း တိတိကျကျ စိပ်စရာမလိုပါဘူး နေ့တိုင်း မှန်မှန်စိပ်ဖို့ပဲလို ပါတယ်ရှင့် စိပ်မဲ့ နေ့ရက် များ ၉ပါး စလုံး ကိုနေ့တိုင်း တစ်ပတ်စီ အရဟံ (၁)ပတ် သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ (၁)ပတ် ဝိဇ္ဇာစရဏ သမ္ပန္နော (၁)ပတ် သုဂတော (၁)ပတ် လောကဝိဒူ (၁)ပတ် အနုတ္တရော ပုရိသ ဒမ္မသာရထိ (၁)ပတ် သတ္ထာဒေဝ မနုဿာနံ (၁)ပတ် ဗုဒ္ဓေါ (၁)ပတ် ဘဂဝါ … Read more
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် သတိပေးချက် 8.7.2021 ရက်မှစတင်ပြီး တပတ်အတွင်းကားလမ်းရေကျော်ခြင်း တောင်များပြိုကျခြင်းမြစ်ရေများလျှံပြီးရေကြီးခြင်းရေစီးဆင်းမှု့မကောင်းသောနေရာများတွင် ပြည့်လျှံရေကြီးခြင်းဖြစ်စဉ်များမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဒေသတွေမှာ တပတ်အတွင်းဖြစ်လာနိုင်သည်ကိုကြိုတင်အသိပေးခြင်း သဘာဝဘေးဆိုတာ ကြိုတင်သိရှိကာကွယ်နိုင်ရင် ဆုံးရှုံးမှု့လည်းနည်းနိုင်ပါတယ် လေထုက တသတ်မတ်ထဲသွားနေတာမဟုတ်ပါအမြဲပြောင်းလည်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ လက်ရှိလေထု အနေအထားနဲ့တွက်ချက် ပြီးဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်းတာပါ ဒါကြောင့် ကြိုတင်အသိပေးတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီး ဒီသတိပေးချက်ကိုရေးသားလိုက်တာပါ အဓိကဖြစ်စဉ်က ‌ဟိုင်နန်ကျွန်းက 97wပါသူရဲ့ ရွေ့လျှားမှု့က မြောက်ဘက်ကိုပါများရင်တရုတ်ပြည်ထဲကိုဝင်နိုင်ပြီးအနောက်ဘက်ကို အားများလာရင် ဗီယက်နန်နိုင်ငံ မြောက်ဘက်ဟနွိုန်းမြို့ဘက်ဝင်နိုင်တယ် ဗီယက်နန်ပင်လယ်ဘက်ကို ဝင်တာနဲ့လေဖိအားနည်းလည်း လေထုဖိအားတွေဆက်တိုက်ကျဆင်းပြီး မုန်တိုင်ငယ်အဆင့်လေတိုက်နှုန် 30mphကျော်သွားနိုင်တယ်အနောက်ဘက်ကို အားပြုပြီးရွှေလာနိုင်တယ် ဒါဆိုရင် လက်ရှိ ဆွဲခေါ်နေတဲ့ မုတ်သုန်လေကိုပြန်ပြီး သက်ရောက်မှု့တွေရှိလာမယ်နောက်ပြိုကွဲးထွက်လာမယ့် တိမ်ဆိုင်တွေလည်းသက်ရောက်မှု့ရှိလာမယ် ဒါတွေနဲ့ သက်ရောက်မှု့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေ ခံစားရပြီးမုတ်သုန် ထုတ်ကုန်နဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ ပိုပြီးခံစားရတတ်တယ် အထူးသဖြင့် တနင်္သာရီ တိုင်းဒေတွေမှာပိုပြီးဖြစ်ပွားနိုင်တယ် မွန်ပြည်နယ်တို့ ကရင်ပြည်နယ်ဘက်လည်း ပေါ့ဆလို့ မရတဲ့အတွက်သတိရှိကြပါ မဖြစ်ခဲ့လျှင် ဝမ်းသာစရာပါဖြစ်ခဲ့သော် ကြိုတင်သိရှိကာကွယ်ထားနိုင်သည့်အတွက်ဆုံးရှုံးမှု့နည်းစေပါတယ် … Read more
၇ရက်ဆက်တိုက် ဘီယာနဲ့မျက်နှာသစ်ခဲ့ရင် အမေတွေကပြောလေ့ရှိကြတယ် နို့ကအသားအရေအတွက်အရမ်းကောင်းတယ်တဲ့လေ။ ဟိုးးး ရှေးခေတ်တွေတုန်းကဆို နို့စိမ်ပြီးတောင်ရေချိုးကြသေးတာ။ ဂန္တဝင်အလှဘုရင်မကြီးကလီယိုပတ်ထရာလိုလေ။ အခုခေတ်မှာတော့ အဲဒီအလေ့အထတွေ ခဏခေါက်ထားလိုက်ကြရအောင်နော်။ သောက်လို့ရော ရေချိုးလို့ရော ခေါင်းလျှော်လို့ပါရတဲ့ ခေတ်သစ်ရဲ့အလှကုန်ကတော့ ဘီယာပါတဲ့။ မုယောစပါး၊ နှံစားပြောင်း၊ စပါးတွေကနေချက်လုပ်ထားတဲ့ဘီယာထဲမှာ အသားအရေကိုအားဖြစ်စေတဲ့ဓါတ်ပစ္စည်းတွေအများကြီးပါဝင်တယ်ဆိုတာကို သင်သိပါသလား? ၇ရက်ဆက်တိုက် ဘီယာနဲ့မျက်နှာသစ်ပေးရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲလို့ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်… Day 1. ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ဘီယာကို မတ်ခွက်ထဲထည့်ပါ။ ဆေးကြောသန့်စင်ပြီးသားမျက်နှာကို ဘီယာနဲ့ထပ်ဆေးပါ။ အသားထဲစိမ့်ဝင်အောင် လက်ဖျားထိပ်နဲ့ ဖိဖိပေးပါ။ နူးညံ့သောမျက်နှာသုတ်ပုဝါဖြင့် အသာအယာတို့ပြီးသုတ်ပါ။ ညဘက်သစ်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ Day 2. ညစဉ်တိုင်းမှာ မတ်ခွက်ထဲကဘီယာကုန်သည်အထိ မျက်နှာဆေးပါ။ ဝက်ခြံရှိပါက စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းလေးခံစားရပါလိမ့်မယ်။ Day 3. ဝက်ခြံတွေ သိသိသာသာလျော့ပါးလာတာကို အံ့သြစွာနဲ့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဘီယာရဲ့ antibacterial action ကြောင့် ဝက်ခြံကုသရာမှာ … Read more
ခန္ဓါကိုယ်မှာ ဗီတာမင် A ချို့တဲ့လာတဲ့အခါ ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေ ပြလာတတ်လဲ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက် ဗီတာမင်တွေက မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ အမြင်အားကောင်းဖို့၊ ကျန်းမာတဲ့အသားအရေအတွက် ဗီတာမင်အေ လိုအပ်ပါတယ်။ အစားအစာအများစုမှာတော့ ဗီတာမင်အေတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်၊ ကြီးထွားဖို့ အရှိန်ယူနေတဲ့ကလေးတွေမှာ ဗီတာမင်အေ ချို့တဲ့လို့မဖြစ်ပါဘူး။ ခန္ဓါကိုယ်မှာ ဗီတာမင်အေ ချို့တဲ့လာပြီ ဆိုရင်တော့ လက္ခဏာတွေ ပြလာတတ်ပါတယ်။ ၁။ အသားအရေခြောက်လာခြင်း အရေပြားက တစ်ရှူးတွေကို ပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့အတွက် ဗီတာမင်အေကို လိုအပ်ပါတယ်။ အသားအရေစိုပြည်ဖို့ဆိုရင် ရေဓါတ်ပြည့်နေဖို့လည်း လိုပါသေးတယ်။ ဗီတာမင်အေ ချို့တဲ့ပြီဆိုရင် အသားအရေက ခြောက်လာပြီး ယားလာတတ်ပါတယ်။ ၂။ အမြင်အာရုံဝါးလာခြင်း ညအမှောင်ချိန်မှာ အရာဝတ္ထုတွေကို ပုံမှန် ထက်ပိုပြီး ဝါးဝါးပဲမြင်ရတာကလည်း ဗီတာမင်အေ ချို့တဲ့ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာပါပဲ။ ၃။ … Read more
ဂျင်းပြုတ်ရည် မသောက်သင့်သူများ ခုချိန်မှာ ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင်ဆိုပြီးဂျင်းပြုတ်ရည်တွေ သောက်ကြပါတယ်။ဂျင်းဟာ ကောင်းကျိုးတွေ အများကြီး ရှိသလိုတချို့လူတွေအတွက်ကတော့အကျိုးမရှိပါဘူး။ သွေးကျဲဆေးတွေ သောက်နေရတာကို ဂျင်းပြုတ်ရည်တွေ သောက်မိလို့ နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပို့စ်လေးလဲ တွေ့လိုက်မိပါတယ်။အောက်မှာရေးထားတဲ​့ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ရှိသူတွေကဂျင်းပြုတ်ရည် သောက်တာမျိုးကိုရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ ❌သွေးကျဲဆေးသောက်နေသူတွေ ❌ သွေးတိုး ကျဆေးသောက်နေသူတွေ ❌ဆီးချိုရောဂါဆေးသောက်နေသူတွေ ❌အင်ဆူလင်ထိုးနေရသူတွေ ❌ သွေးမတိတ်ရောဂါရှိလို့ သွေးခဲဆေးသောက်နေရသူတွေ ❌ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ ဂျင်းဟာ သွေးကျဲစေပြီး သွေးတိုး ကျစေတဲ့ အစွမ်းရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးကျဲဆေး တွေ ၊ သွေးတိုးကျဆေး သောက်နေရသူတွေအဖို့ပိုဆိုးနိုင်လိ​ု့ မသောက်သင့်ပါ။ ဆီးချိုဆေးတွေ နဲ့ အင်ဆူလင်လိုမျိုး နဲ့ဓာတ်ပြုပြီး ဆေးအာနိသင်ကိုလျော့စေတဲ့အတွက်အဆိုပါဆေးသောက်နေရသူတွေလဲရှောင်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ အနေနဲ့ကတော့ လရင့်တဲ့အခါမှာ အချိန်မတိုင်ခင် သားအိမ်ညှစ်ပြီးကလေးစောမွေးတတ်လို့ မစားသုံးသင့်ပါဘူး။ MediExpress မှ ရေးသားမျှဝေပါတယ်။ ဂ်င္းျပဳတ္ရည္ မေသာက္သင့္သူမ်ား … Read more